၁၂:၅၅၊ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ
၆၉ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်
Please discuss in talk section before you edit.
၁၁:၄၉၊ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
ခန့်ဟိန်းကို (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး)
စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၂:၅၅၊ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
(Please discuss in talk section before you edit.)
ဤဆောင်းပါးသည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နောက်ပိုင်းတွင် ပြောဆိုသော မွန်ဘာသာစကားအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ လာအိုအနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် မုန်၏မြောက်ပိုင်း ဗီယက်နမ်အမျိုးသားဘာသာစကားတို့အတွက် မုန်းဘာသာစကားကို ကြည့်ပါ။
မွန်ဘာသာစကားသည် [[မြန်မာနိုင်ငံ]]နှင့် [[ထိုင်းနိုင်ငံ]]တွင် နေထိုင်ကြသော မွန်လူမျိုးတို့အသုံးပြုသည့်အရှေ့တောင်အာရှသုံး ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မွန်ဘာသာစကားသည် [[ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ|ကမ္ဘောဒီးယား]] ဘာသာစကားနှင့် ဆင်တူသော်လည်း အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသရှိ ဘာသာစကား အများစုကဲ့သို့ အသံအနိမ့်အမြင့် အတက်အကျရှိသော ဘာသာစကားမဟုတ်ပေ။ ယနေ့ မွန်ဘာသာစကားကို လူဦးရေ တစ်သန်းထက်နည်းသောသူများက ပြောဆိုလျက်ရှိကြသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များကမွန်ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုမှာ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်အတွင်း လျင်မြန်စွာကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ မွန်မျိုးနွယ် အများစုသည် ဗမာဘာသာစကားမြန်မာဘာသာစကား တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ပြောဆိုကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွန်ဘာသာစကား ပြောဆိုသူအများစုသည် မွန်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြပြီး [[တနင်္သာရီတိုင်း]] နှင့် ကရင်ပြည်နယ် တို့တွင်လည်း မွန်စကားကို ပြောဆိုကြသည်။ မွန်စာပေ အရေးအသားသည် [[အိန္ဒိယနိုင်ငံ]]ရှိ ဗြာမီအရေးအသား မှဆင်းသက်လာပြီး ဗမာစာပေမြန်မာစာပေ အရေးအသား၏ မူလအစဖြစ်သည်။
မြန်မာ့သမိုင်းတွင် မွန်ဘာသာစကားသည် အရေးပါသော ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အေဒီ ၁၂ ရာစု တိုင်အောင် [[ဧရာဝတီမြစ်]]ဝှမ်း၏ ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင် ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကား ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း အောက်ပိုင်း တောင်ကြား မွန်မင်းနေပြည်တော်များ အတွင်းသာမက ပုဂံခေတ် (ပုဂံ) ဗမာနိုင်ငံ အထက်မြစ်ဖျားအထိ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ၁၀၅၇ ခုနှစ်တွင် မွန်မင်းနေပြည်တော် သထုံပြည်သည် ပုဂံနိုင်ငံ လက်အောက်သို့ ကျရောက်ပြီးနောက်တွင်လည်း အထူးသဖြင့် မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မွန်စာပေသည်ဆက်လက်၍အဓိက ဘာသာစကားဖြစ် ခဲ့သည်။ပုဂံဘုရင်ကျန်စစ်သားမင်း(၁၀၈၄၁၁၁၂)သည် မွန်ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးခဲ့ပြီး မွန်ဘာသာစကားကိုအားပေးချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းအုပ်စိုးစဉ်ကာလအတွင်း မွန်အရေးအသားသည်ဗမာစာပေအရေးမွန်အရေးအသားသည်မြန်မာစာပေအရေး အသား တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ အရင်းခံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မွန်ခေတ်တွင် [[ကျန်စစ်သား]]မင်းသည် မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော များစွာသော ကမ္ဗည်းကျောက်စာများကိုထားရစ်ခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကာလအတွင်း ပါဠိ၊ ပျူ၊ မွန် နှင့် ဗမာစာတို့ဖြင့်မြန်မာစာတို့ဖြင့် မျက်နှာလေးဖက်တွင် အတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်ကြောင်း တစ်ခုတည်းကို ဖော်ပြရေးသားထားသော မြစေတီကျောက်စာကို ထွင်းခဲ့သည်။သို့ရာတွင် ကျန်စစ်သားမင်း နတ်ရွာစံပြီးနောက် မွန်ဘာသာစကား အသုံးပြုမှုမှာ ဗမာလူမျိုးများအတွင်းကျဆင်းခဲ့သည်။မြန်မာလူမျိုးများအတွင်းကျဆင်းခဲ့သည်။ မွန်နှင့်ပျူတို့အစားရှေးဗမာဘာသာစကားကို ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင်ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကား အဖြစ် စတင် အစားထိုးခဲ့ကြသည်။
ပျက်သုဉ်းသွားသော ဒွါရဝတီမင်းနေပြည်တော်မှဒွွါရဝတီမင်းနေပြည်တော်မှ မွန်ကမ္ဗည်းစာများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြန့်ကျဲနေသည်။ သို့ရာတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြသူများမှာ မွန်၊ မွန်နှင့်မလေး ကပြားများ၊ သို့မဟုတ်
ပုဂံကျရှုံးပြီးနောက် မွန်ဘာသာစကားကို ယခုခေတ် အောက်မြန်မာပြည် ဖြစ်သော လွတ်လပ်သည့် မွန်မင်းနေပြည်တော် ဟံသာဝတီ ပဲခူး (၁၂၈၇-၁၅၃၉) တွင် ဘာသာစကားမတူသူချင်း ဆက်သွယ်ရာတွင် ပြောဆိုကြသည့် အရောအနှောစကားအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုလာခဲ့ကြသည်။ ၁၉ ရာစု အလယ်တိုင်အောင် မွန်လူမျိုးတို့ အများစုနေထိုင်သော အောက်မြန်မာပြည်တွင် မွန်ဘာသာစကားကို ပျံ့နှံ့သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ပျံ့နှ့ံသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
၁၈၅၂ ခုနှစ် အောက်မြန်မာပြည်ကို ဗြိတိသျှ တို့သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသ တွင်လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လာရောက် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းကို အားပေးခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းသို့ [[အိန္ဒိယနိုင်ငံ|အိန္ဒိယ]] နှင့် [[တရုတ်နိုင်ငံ]]တို့မှ လူများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားသော နေရာဒေသ များမှလူများ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အစုလိုက်အပြုံလို်က် ပြောင်းရွှေ့လာရောက် နေထိုင်ခြင်းသည် မွန်ဘာသာစကားကို တတိယမြောက် ဘာသာစကားအဖြစ် အဆင့် လျှော့ကျစေခဲ့သည်။ ကိုလိုနီဗြိတိသျှတို့ အုပ်စိုးခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း ဘာသာစကားမှာ နည်းပါးဆုတ်ယုတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးအချိန်မှစ၍ ပြောဆိုသူအရေအတွက် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းမှုကို တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ နောက်ဆက်ခံသော မြန်မာအစိုးရတို့မှ ထောက်ပံ့မှု အနည်းငယ် သို့မဟုတ် လုံးဝမရရှိဘဲ မွန်ဘာသာစကား (အထူးသဖြင့် မွန်အရေးအသား) ကို အများစုအားဖြင့် မွန်ဘုန်းတော်ကြီးများက ဆက်လက် ပြန့်ပွားစေခဲ့သည်။ မွန်ဘာသာစကား သုံးစွဲမှုလမ်းညွှန်မှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မွန်တော်လှန်ရေးသမားများ ထိန်းချုပ်သော နယ်မြေဒေသထဲ၌ ရှင်သန်နေပါသည်။
== ဒေသသုံးစကားများ ==
== အရေးအသား ==
မွန်စာပေအရေးအသားမှ ဗမာစာပေအရေးအသားမြန်မာစာပေအရေးအသား ဆင်းသက်လာသည်။ သို့ရာတွင် ကွဲပြားသော စာလုံးအတော်များများနှင့် ဗမာစကားတွင်မရှိသောအသံထွက်စနစ်ကိုပြသည့်အသံထွက်ကွဲအောင်မြန်မာစကားတွင်မရှိသောအသံထွက်စနစ်ကိုပြသည့်အသံထွက်ကွဲအောင် စာလုံးပေါ်တွင်ပြသော အမှတ်အသားများကို အသုံးပြုသည်။ အလယ်စာလုံး “လ” ၏ အသံထွက်ကွဲအောင် စာလုံးပေါ်တွင်ပြသော အမှတ်အသားကို စာလုံး၏ အောက်တည့်တည့်တွင် ရေးသည်။
[[File:mon font .jpg|left|250px|မွန် အက္ခရာများ]]
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/328008" မှ ရယူရန်